कोरोना नियन्त्रणका लागि विकास बजेट कटौती गर्न तयार छौँ - GBM
कोरोना नियन्त्रणका लागि विकास बजेट कटौती गर्न तयार छौँ
२०७८ जेष्ठ ११ gautam buddha sandesh	0 Comments
सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नंं ४ का वडाअध्यक्ष मुक्तीनाथ यादब (भोला) सँग गौतमबुद्ध सन्देशले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशः
कोरोना महामारीले देश आक्रान्त परिरहेको अवस्थामा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ४ ले के कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ ?
पछिल्लो समय कोरोना महामारीले देश नै आक्रान्त वनीरहेको अवस्था छ । गत बर्षको कोरोना महामारी भन्दा यो बर्षको महामारी धेरै जटिल बनेको छ । विशेषगरि अक्सीजन अभाव नै प्रमुख चुनौती बनीरहेको छ । अहिले कार्यालय वन्द रहेतापनी कोरोना महामारीमा वडाबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्दे आइरहेका छौ । वडामा रहेका वडाबासीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौ जसका लागि कोरोना परिक्षण र राहतका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएका छौ ।
वडामा कोरोना भाइरस संक्रमित विरामीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो वडामा हाल ३ वटा कोरोना भाइरसका केसहरु छन् । विगतमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका महानुभाव नीको भइसक्नुभएको छ । मुख्य गरि अहिलेको समयमा कोरोना संक्रमितहरुको उपचार गर्न एम्बुलेन्स, अस्पताल, अक्सीजन र डाक्टरको अभाव नै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रका लागि नगरपालिकाबाट कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ ?
वडामा बजेट अभावका कारण समस्या परिरहेको छ । नगरपालिका र वडा बिचको सहयोगको कुरा गर्दा नगरपालिकाले अझै पनि वडाहरुलाई प्रर्याप्त सहयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो समयमा समन्वयको अभाव नै देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा मजदुर र दैनिक ज्यालादारी गरि खाने जनता अती नै समस्यामा परेका छन् तसर्थ नगरपािलकाले यस विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
निशेधाज्ञाको समयमा जनतालाई राहतको व्यवस्था के कसरी गरिरहनुभएको छ ?
विगतमा राहत वितरणमा गुनासोहरु आइरहेको थियो । यो समयमा नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै राहत वितरण भएको छैन । तर म मेरो वडाका जनताहरुलाई म आफै व्यक्तीगत रुपमा सक्दो सहयोग गरिरहेको छौँ । यद्यपी यो प्रयाप्त भने होइन । अहिलेको समयमा विकास बजेट कटौति गरि नगरपालिकाले राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा आवश्यकता बमोजिम कोरोना नियन्त्रण र राहतका लागि विकास बजेट कटौतीको लागि वडा नम्बर ४ तयार छ ।
कोरोना महामारीले विकास निमार्णमा कस्तो असर प¥यो ?
विकास निमार्णको कुरा गर्दा वडामा जतीपनि विकासका कामहरुको योजना थीयो त्यो लगभग पुरा गरिसकेका छौ । एउटा विद्यालयको काम बाकी थियो त्यो पनि हामीले पुरा गर्न सफल भएका छौ । आगामि वर्षका योजनाहरु आगामी बजेट अनुसार तय हुनेछन् ।
आगामी बर्षमा मुख्य मुख्य विकासका योजनाहरु के छन् ?
हाम्रै वडामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेको र व्यापारीक क्षेत्र भएकोले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि चुनौतिपूर्ण छ । त्यस्तै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि राम्रो सम्भावना भएको वडा हो । जसका लागि मैले यी कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै वडामा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने , एउटा स्वागतद्धार बनाउने जसमा लाइटिङ र सुन्दर, हरियाली वडाको रुपमा परिचित बनाउने योजना बनाएको छु । त्यस्तै अन्य बाटो, नाली र अन्य विकासका कार्यहरु पनि गर्ने योजना छ ।
युवाहरुका लागि रोजगारका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
युवाहरुका लागि मैले रोजगारको राम्रो सम्भावना देखेर प्रत्यक्ष रुपमा मेरो योजना नगरपालिकामा पनि राखेको छु । सिद्धार्थनगर नगरपालिमा दर्तानभएका साना व्यवसायहरुलाई युवाहरु (कर्मचारी) परिचालन गरि दर्ता गर्न सकियो भने साना व्यवसायीहरु करको दायरामा आउने र नगरपालिका भित्र बेरोजगार युवाहरुलाई पनि रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका लागि नगरपालिका नै अग्रसर भयो भने सम्भब छ ।
अहिलेको बिषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य नै हामि जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख जिम्मेवरी हो । यसका लागि सरकार , सरकारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधि लगाएत सम्पुर्ण सरोकार वालाहरु कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नु पर्छ । हाम्रो नगरपालिका तथा वडाबासिहरुको स्वस्थ्यको लागि हमि सबै मिलेर लागौ भन्न चाहान्छु ।
← “अवको ६ महिना भित्रमा भिमअस्पताललाई स्तरोन्नती गराउने लक्ष्य लिएको छु“ भण्डारी
तिलोत्तमामा ‘ट्राफिक लाइट’ जडान →
खाद्य असुरक्षा : एक विश्वव्यापी चुनौती
२०७५ पुष २९ gautam buddha sandesh	0
राजनीतिमा आउने संम्भावना मेरो पनि छ : महानायक राजेश हमाल